Organizationstù ndị ọzọ ndị m kwurịtara okwu na-ala azụ ịchọta enyemaka nke ndị ọrụ ha, ụfọdụ na-emepe iwu megide ya. Ọ na-emetụta uche m nke ukwuu na ụlọ ọrụ ga-amachibido onyinye ya dị oke ọnụ ma dị oke ọnụ ma gbochie ha ịkekọrịta ihe ọmụma ha, oke agụụ, ma ọ bụ ọbụna echiche ha. N'ezie, enwere ndị nwere ụlọ ọrụ na-achịkwa nke ọma, mana gosi m ụlọ ọrụ na-achịkwa ma ị ka ga-ahụ mmemme dị irè nke na-arụ ọrụ n'ime nrụgide.
N'agbanyeghị nke ahụ, ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ndị ọrụ na-eche na ọ dịghị ọrụ dịịrị ha iji nyere aka n'ịkwalite ụlọ ọrụ ahụ. N'okwu ndị ahụ, m ga-eleba anya na ọdịbendị nke ụlọ ọrụ ahụ na ụdị ndị ọrụ m na-arụrụ ọrụ. Apụghị m iche n’iche goro onye ọrụ na-achọghị ịkwalite ọrụ ha. Apụghị m iche n’echiche ịbụ onye ọrụ na enweghị mpako iji kwalite mbọ ndị otu m.
ọrụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa ugbu a na mbọ ahịa ịzụ ahịa ọdịnaya. Site na ọnụ ọgụgụ dị nkọ na nchịkwa na mgbasa ozi mgbasa ozi na mmụba dị egwu na ọdịnaya ọdịnaya, agbụrụ a iji dọta uche ndị mmadụ na-asọmpi karịa oge ọ bụla na ndị ọrụ abụrụla akụ dị mkpa dị ka ndị nnọchi anya mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze. N'ezie, otu ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ 20 nwere ihe karịrị ndị 200 na netwọkụ ha nwere ike mepụta mmata ugboro anọ na mgbasa ozi mmekọrịta.
Nyochaa mmemme nke arụmọrụ yana ụgwọ ọrụ ndị ọrụ nwere mkpali maka nkwado ha.